के हो आयोडिन ? कस्तो अवस्थामा आयोडिनको एकदमै आवश्यक पर्छ ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
आयोडिनका फाइदाहरु :
सबै उमेरमा :
आयोडिनको सही मात्राले शरीरका बिभिन्न अंगहरुको बिकासमा सहयोग गर्ने हुनाले यसको प्रयोगले गलगाँड तथा हाइपोथाइरोइडिजम् जस्ता समस्याहरु बाट मुक्ति मिल्छ ।
यो जानकारी पनि थाहापाउनुहोस् :
भोजन आहार हो, जसलाई हामीले मुख र जिब्रोद्वारा भित्र लिन्छौं । तर आँखाद्वारा पनि हामीले बाहिरको दृश्य भित्र लिन्छौं । दृश्य पनि आहार नै हो । कानले लिने आवाज, त्वचाले गर्नेे स्पर्श तथा मनले ग्रहण गर्ने विचार र कल्पना पनि आहार नै हो । गलत विचारको आहारले नै अधिकांश मानसिक रोग सुरु हुन्छन् । त्यसैले त भनिन्छ, जस्तो खान्छौं, उस्तै हुन्छौं । त्यसैले आहारको यो महत्ववलाई मनन् गर्दै स्वस्थ जीवनका लागि चार कुरामा विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ ।
Up Next गुलियो चिनीको बढी सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा तितो बेफाइदाहरु निम्त्याउछ – जान्नै पर्ने कुरा